Warbixin: Sidee Ayay U Shaqayn Jirtay Dekedda Cadan Intii Aan Lagu Wareejin DP World, Imika Se Halkee Ayay Taagan Tahay?? | Haqabtire News
Warbixin: Sidee Ayay U Shaqayn Jirtay Dekedda Cadan Intii Aan Lagu Wareejin DP World, Imika Se Halkee Ayay Taagan Tahay??
Hargeysa:-(HTN) Dekadda Cadan waxay ahaan jirtay dekadda 2-aad ee adduunka oo ay doonyaha & maraakiibtu ka sii qaataan shidaalka marka laga tago New York oo iyadu dekadda 1-aad ahayd. Waxay ahayd la tartamaha ugu xooggan dekaddaha dunnida, uguna dhow Dubai masaafo ahaan, ee la tartami kartay dekaddaha Dubai.
Sannadkii 2008-dii ayay ahayd markii shirkadda Dp World oo laga leeyahay dalkaasi Imaaraadka Carabta ay maamulkii dalkaasi Yemen u soo jeedisay in ay maalgashi ku sameyn doonto dekaddaasi. Inkasta oo cadcaadsi iyo iska caabin xooggan uu la kulmay heshiiskaasi ay shirkaddu la sexaaxanaysay maamulkii dalkaasi Yemen bal se madaxwaynihii wakhtigaasi Cali Cabdalla Saalax ayaa si hoos ah lacag 600 oo million oo dollar ay shirkaddu jeebkiisa ugu shubtay si uu u sexeexo heshiiska maalgashi ee dekadda Cadan.
Shirkadda Dp World markii ay la wareegtay maamulka iyo maalgelinta dekaddi Cadan markiiba waxay qaadey talaabooyin ay ku wiiqeyso horumarka dekadda Cadan waxaanu ka kow ahaa in markii faraha ka qaadday dayactirkii uu u baahnaa qalabka lagu shaqeeyo ee dekadda, waxaana meeshii ka baxay qalabkii xidhiidhinaayay shaqaalaha dekaddaasi, taasoo dhibaato weyn ku keentay wada wada shaqeyntii shaqaalaha dekada iyo maamulkeeda.
Shirkadda Dp World ayaa la tilmaamay in ay ahayd waxa ugu wayn ee curyaamiyey dekadda Cadan oo ahayd dekaddaha dunnida ugu mashquulka iyo dhaqaalaha badan.
Waxa kale oo ka mid ahaa talaaboyinka ay shirkaddu qaadey si ay u wiiqdo horumarkii dekadda Cadan in ay 80% la kordhiyey khidmadii ay doonyuhu ku soo xidhanayeen ee dekaddaasi. Isla markiba waxa hoos u dhac wayni ku yimid doonyihii ganacsi ee dekaddaasi ku soo xidhanaayey.
Waxay DP World sidoo kale sii iibisay qalabkii dekadda ee shaqaynayay iyadoo ku andacoonaysa in ay yihiin qalab kharaab ah oo duugoobay oo aan la isticmaali karin. Intaas waxaa sii dheeraa, waxay si ku talagal hoos ugu dhigtay mushaharaadkii shaqaalaha dekadda, si ay shaqaaluhu ugu khasbanaadaan in ay shaqada isaga tagaan oo ay shaqooyin kale u raadsadaan. Talaabadaasina waxay keentay in shaqaalihii badankoodu ka tagaan shaqadii dekaddaasi Cadan.
Shirkadihii la macaamili jiray dekadda Cadan waxay bilaabeen in ay u wareegaan Jabbuuti -oo ay sidoo kale Imaaraatku gacanta ku hayeen.
Hadda dekaddii Cadan waxay noqotay dheeman bad ku dhacday.
Dp World Iyo Berbera
Haddaba shirkadda Dp World waxay sheegtay dhawaan in ay maalgashanayso dekadda magaalada Berbera oo iyaduna ah mid ku taal marin baddeed muhim ah oo ay iskaga kala gooshaan maraakiibta iyo doonyaha ganacsi ee bariga dhexe. Saansaanta muuqata ayaa ah in shirkadda Dp World ay ku guuldareysan doonto maalgelinta dekadda Berbera marka loo fiiriyo dekaddihi ay soo maalgashatay oo maanta baddankoodu isbedel ku dhacey.
Dawladda Somaliland ayaa iyaduna hadda uu caddaadis kaga imaayaa dalalka jaarka ah iyada oo lagu eedaynaayo in ay shirkaddaasi la sexeexatay heshiis baal marsan sharciga.
Shacabka Somaliland ayaa iyaguna ka dhursugaayay wax qabadaka shirkaddaasi, inkasta oon ilaa hadda aanay muuqan wax waxqabad ah oo ay la taaban karo oo ay fulisay shirkaddani tan iyo intii ay la wareegtay gacan ku haynta dekadda magaalada Berbera.